कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना आउँदै: एकिकृत बस्ती विकासदेखि पर्वतिय विश्वविद्यालयसम्म – Enayanepal.com
कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना आउँदै: एकिकृत बस्ती विकासदेखि पर्वतिय विश्वविद्यालयसम्म
२०७६, १३ मंसिर शुक्रबार मा प्रकाशित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना एक महिनाभित्र सार्वजानिक गर्ने भएकोे छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयो गठन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि केही ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक गुनासो भइरहेको थियो । विहिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले अवको एक महिनाभित्रै कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना आउन लागेको बताएका हुन् ।
उपाध्यक्ष रेग्मीले कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना ल्याउनुभन्दा अगाडि एकपटक युवाहरुसंग पनि परामर्श लिने बताए । “एक महिनामा हामिले कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना ल्याउँदैछौं । त्यसभन्दा अगाडि हामि एकपटक तपाईहरुसंग पनि परामर्श लिन्छौं ।” उनले भने । उपाध्यक्ष रेग्मीले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले वि.सं. २१०० मा कर्णाली प्रदेश कस्तो हुने भनेर सोच २१०० बनाइरहेको बताए । “अहिले हामि दुखारी कर्णालीबासी छौं अवको पच्चीस् वर्षपछि समृद्ध कर्णाली त भइहाल्छ सुखारी कर्णालीबासी पनि हामि हुन्छौं ।” उनले भने, “अव हामि पच्चीस वर्षपछिको कर्णाली कस्तो हुने भन्ने योजना पनि बनाउँदैछांै ।”
देशकै विकट भनेर चिनिएको कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पञ्चवर्षिय योजना आएमा वजेट खर्च पनि तिनै योजनाअनुसार हुने र समृद्धी अलि सजिलै आउने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ । पञ्चवर्षिय योजनाको नारा पनि दमदार नै छ । “शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पुर्वाधार” भन्ने नारा राखिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार उक्त पञ्चवर्षिय योजनामा पनि पुर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ । पर्यटनको सम्भावना धेरैनै रहेको कर्णालीमा सडकलगाएतका पुर्वाधार एकदमै आवश्यक देखिन्छ । भने विद्युतमा पनि प्राथामिकता रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै पञ्चवर्षिय योजनामा एकिकृत बस्ति विकासको योजनालाई प्राथामिकता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका ३३ प्रतिशत घरधुरी उच्च जोखिममा रहेका छन् । सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै योजना आयोगले पुर्वाधार अन्तर्गत नै एकिकृत बस्ती विकासलाई प्राथामिकता दिने भएको हो । त्यस्तै हरेक परिवारलाई न्युनतम आयआर्जन गर्नसक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
रोजगारमुलक शिक्षा र उत्पादनमुलक औधोगिक क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर योजना ल्याएको बताउँदै उनले पर्वतिय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्मको योजना रहेको बताए । फरक प्रसंगमा उनले कर्णालीको उत्पादन प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
“हरेक कर्णालीबासीले दैनिक जिवनयापनदेखि हरेक कुरामा सकेसमम कर्णालीको उत्पादन प्रयोग गरांै, यदि उपलब्ध नभए नेपालको प्रयोग गरौं अनिमात्र बाहिरको प्रयोय गरौंला ।” आफुले लगाएको कोट र जुत्ता देखाउँदै कर्णाली प्रदेश योजना आयागका उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, “यो मैले लगाएको कोट र जुत्ता पनि कर्णालीकै उत्पादन हुन । गौरव छ मलाई कर्णालीको उत्पादन प्रयोग गर्नुमा । सबैले यस्तै बानि बसालौं ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले युवाहरुले खाली गुनासो मात्र गर्ने तर जागरुक भएर प्रश्न नगरेको बताए । त्यस्तै राष्टिय युवा गैसस महासंघका अध्यक्ष कमल सुवेदिले कर्णालीका युवा कालापहाड नगएर आफ्नो प्रदेशको समृद्धीका लागि उद्यम िबन्नुपर्ने बताए । राष्टिय युवा गैसस महासंघले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरिय युवा सम्मेलनमा कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका युवाहरको सहभागिता रहेको थियो ।